पदको लागी जस्तो सुकै सहमति गर्न पनि तयार ! - Public Suchana : Public Suchana
पदको लागी जस्तो सुकै सहमति गर्न पनि तयार !
लेखक : admin २९ मंसिर २०७८, बुधबार ०८:३२ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसमा फेरि शेर बहादुर देउवा सभापतिमा निर्बाचित भएका छन । देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए संगै चुनौति र अबसर दुबै उनी सामु खडा भएर आएका छन । पार्टी भित्रको आन्तरिक मदभेद मिलाउनु उनको प्रमुख दायित्व रहने छ । पार्टीका बरिष्ठ नेता राम चन्द्र पौडेललाई चित्त बुझाएर संगै लैजानु पर्ने जिम्मा पनि देउवाको काँध माथि नै छ । सभापति पदमा पराजित डा शेखर कोइरालालाई पनि मिलाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी देउवा माथि छ ।
अब देउवाले काँग्रेसलाई कसरी अगाडी बढाउँछन त्यो हेर्न आम कार्यकर्ता चासोका साथ बसेका छन । नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिबेशनबाट देउवा फेरी दोहोरिनु नेपाली काँगे्रसका लागी फाइदा हो वा घाटा त्यो उनैले जानुन् । शेखर कोइराला पनि काँग्रेस पार्टी भित्र लोकप्रिय नेता नै हुन । देउवाले सभापतिमा जित्नुमा प्रकाश मान सिंहको ठूलो भूमिका छ । उनी पहिलो चरणमा आफै सभापति पदमा भिडेका थिए । आफनो थोरै मत आए पछि दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाएका थिए । देउवा र सिहं बीच लेन देनको सहमति भएको खबर पनि सुनिन्छ ।
पदको लागी जस्तो सुकै सहमति गर्न पनि तयार हुने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु प्रति जनताको बिश्वास घट्दो छ । नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिबेशनले बरिष्ठ नेता राम चन्द्र पौडेललाई आशु झार्न बाध्य बनायो । निष्ठा र त्यागको राजनीति गदै आएका पौडेल मतदान गर्न समेत नगएको खवर छ । यस्तो किन भयो ? यो कुरा देउवाले समिक्षा गर्न जरुरी छ । आगामी निर्बाचनमा देउवाले काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सक्छन की सक्दैनन् त्यो नै महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा देउवाले पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउन सकेनन् भने उनी माथि गम्भिर प्रश्न पक्कै उठने छन । नेपाली काँग्रेसको जिम्मा फेरी देउवाको हातमा गएको छ । अब देउवाले पार्टीलाई कुन गतिमा लैजान्छन त्यो आगामी दिनले देखाउने छ । नेपाली काँग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यो पार्टी माथि अझै पनि जनताको बिश्वास र भरोसा छ ।
नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन बोकेर काँग्रेस अघि बढनु पर्ने जरुरी छ । हिजो निष्ठा र त्यागको राजनीति हुन्थ्यो आज लाभको राजनीति भएको छ । हिजो त्याग र निष्ठाका नेता थिए आज स्वार्थी नेता छन । स्वार्थको राजनीतिले न पार्टी बनाउन सकिन्छ न त देश र जनताको भबिश्य । आज सबै पार्टीमा स्वार्थको राजनीति हावी हुदै गएको छ । यसरी देश बनाउन सकिदैन । राजनीति भनेको सेवाभाबले गरिने चिज हो । राजनीतिको नाममा ब्यापार भयो । पैसा हुनेहरु राजनीतिमा हाबी भए । पैसा नहुनेहरु राजनीतिबाट पाखा लाग्दै छन । यो ठूलो समस्या हो । राजनीति बिचार र शिद्धान्तले चल्नु पर्छ । बिचार र शिद्धान्त बिनाको राजनीति लुलो हुन्छ ।